पार्टी र सरकार चलाउन ओली पूर्ण असफल
कुनै पनि विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र छलफल भएर सर्वसम्मत वा अल्पमत÷बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ । अहिलेको चुरो कुरो के हो भने पार्टीका संरचनात्मक कार्यहरु विधि र प्रक्रियाअनुसार चलेन । निष्पक्षरुपमा चलेन, गुटगतरुपमा चल्यो, पार्टीका कमिटीहरुले निरन्तरता पाएन, धेरै दिनदेखि थुप्रै कमिटीहरु जाम छन् । पार्टी कमिटी गठनकै बेलादेखि समस्या छ । हिजो आएका मान्छेहरु सिधै प्रदेश कमिटीमा मनोनयन भए । जबकि विधानको धाराले त्यसका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्ता थुप्रै प्रक्रियाहरुलाई मिचेर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामहरु गर्दै आउनुभएको छ ।
अर्को कुरो, जिम्मेवारी दिने सवालमै पक्षपात भयो । कुनै व्यक्ति मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग यति समय हुँदैन कि पार्टीको कामहरु पनि कुशलतापूर्वक गरोस् । थुप्रै व्यक्तिहरु बिना काम बसिरहेका छन् । अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरु पनि छन्, ती व्यक्तिहरुलाई काम दिँदै नदिने । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्नेतिर पनि अग्रसरता लिएको छैन । त्यस्तै, व्यापक भ्रष्टाचाहरु भइरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी तुलनात्मकरुपमा अन्य पार्टीभन्दा अग्रगामी हुन्छ, भ्रष्ट हुँदैन । पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उहाँका मन्त्रीहरु व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न पूर्ण असफल भइसक्नुभयो, अब उहाँलाई दुवै पदबाट नहटाई हुँदैन । खडगप्रसाद ओलीले गर्न सक्नु हुन्न भने विकल्प त दिनुपर्यो कि त उहाँले सफाइ दिनुपर्छ अनियमितता गरेको छैन । विकास निर्माणसँग जोडिएका सवालहरु, राज्यका जुन आधारहरु छन् त्यसप्रति पटक–पटक प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । उहाँले पार्टीको नीति र विधिअनुसार काम गर्न सक्नुभएन, यो उहाँको अयोग्यता हो कि होइन ?
कामकै प्रणालीमा नेकपाका अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुभएको छ । उहाँका सहयोगी गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो कि पार्टी सहमतिको आधार चल्नुपर्छ, बहुमत वा अल्पमतको आधार चल्छ र ? नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ मा पार्टीको निर्णय बहुमतको आधार हुन्छ । संसदीय दल सञ्चालन गर्ने सवालमा पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनमा संसदीय दल सञ्चालन हुने भनिएको छ । त्यो पनि उहाँ नमान्ने ? संसद दलको उहाँ सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ ? अध्यक्ष भनेको केन्द्रीय कमिटीको हेडिङ्ग गर्ने हो । निर्णय भनेको त सामूहिक हो । बहुमतबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो उहाँले मान्नुपर्छ ।
स्थायी कमिटीमा उहाँको विरुद्धमा दुई तिहाइ मत रहेको छ । दुई तिहाइ व्यक्तिलाई उहाँले पूरै बेवास्ता गर्नुभएको छ । सचिवालयमा र केन्द्रीय समितिमा पनि बहुसंख्यक सदस्य उहाँको विपक्षमा छन् । सबै कमिटीमा उहाँले बहुमत गुमाइसकेपछि उहाँ कुन प्रणालीबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? कसलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुभयो ? पार्टीका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट भएन भने पाँच सय हजार रुपैयाँ दिएर सडकमा नारा जुलुस लगाएर पार्टी चल्छ ? कुनै पनि ठाउँमा उहाँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने आँट गर्न सक्नुभएको छैन ।
उहाँ भारतको विरुद्धमा आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । इन्डो प्यासिफिक स्टेट्याजीको रुपमा रहेको एमसीसी पास गराउन उहाँ वकालत गरिरहनुभएको छ । एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको छ । एमसीसी अध्ययनका लागि झलनाथ खनालको नेतृत्वको समितिले निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, त्यो प्रतिवेदनलाई उहाँले छलफलमा ल्याउन चाहिरहनुभएको छैन ।
त्यसैले उहाँ कुनै पनि हिसावले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँसँग इमानै रहेन । उहाँ आफ्नो अडान छोड्ने स्थिति देखिएको छैन । पार्टीले बहुमतबाट निर्णय गर्छ । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि उहाँले मान्नु हुन्छ कि मान्नु हुन्न त्यो मुख्य कुरा हो । यदि उहाँले मान्नु भएन भने पार्टीले पनि उहाँलाई मानिरहनुपर्ने बाध्यता छैन नि । त्यस हिसावले उहाँ आफै आफ्नो स्तर तल झार्दै हुनुहुन्छ ।
उहाँले पार्टीको बैठकलाई पन्छाउँदै हिंडिरहनुभएको छ । बाहिर यो सन्देश नजाओस् कि प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेर समय पनि दिइएन । छलफलका लागि अनुकूलता पनि दिइएन र पार्टीले सिधै कारबाही गर्यो त्यस्तो स्थिति नहोस् भनेर पटक–पटक हामीले समय दिइरहेका छौं । त्यो समयलाई उहाँले कमजोरी ठानिरहनुभएको छ । पार्टीको नेतृत्व लिने हो भने आगामी महाधिवेशनसम्म र सरकारको नेतृत्व लिने हो भने आगामी निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ । उहाँ हिजो तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो, एमाले होइन । जुन पार्टीको उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो, त्यो पार्टी विघटन भएर एकीकृत भइसक्यो । नेकपा अन्तरिम विधान २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने हो । त्यसअनुसार नेकपाको अन्तरिम विधानलाई उहाँले मान्नु हुन्छ कि मान्नु हुन्न, प्रश्नचिन्ह छ । उहाँले भन्नुपर्यो नि कि अन्तरिम विधानलाई मान्दिन । उहाँ कसको इशारामा काम गरिरहनुभएको छ ?
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणकै सवालमा हेर्ने हो भने पूर्ण असफल देखिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट जति खरिद भएको छ, त्यसमध्ये कति कामै नलाग्ने, खरिदमा पनि अनियमितता भएको, फेरि सेनालाई जिम्मा दिइयो, त्यसमा पनि भ्रष्टाचारका कुराहरु आयो । कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ ? कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमै उहाँले राम्रो र प्रभावकारी काम गरेको भए यस्तो प्रश्न अहिले सान्दर्भिक हुन्थ्यो । अथवा सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माणमै राम्रो काम गरेको भए हुन्थ्यो ।
यस्ता समस्याहरु आउँदै रहन्छन् । तर सरकार यदि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन भने ती समस्याहरुको सामना कसरी गर्ने ? त्यसकारणले यस्तो संवेदनशील अवस्था झन् बढी आवश्यक भइसकेको छ कि सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्यो । कुनै सदस्यले उहाँप्रति पूर्वाग्रही भएर उहाँलाई हटाउन खोजिएको होइन, उहाँको काम सन्तोषजनक नभएर मात्रै यस्तो विषय उठेको हो । यदि उहाँ चित्त बुझाउन सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ र त्यो ढंगको प्रस्तुती गर्नु हुन्छ भने आँट गरेर कमिटी फेस गर्नुपर्यो ।
नेकपाभित्र चिनियाँ सक्रियता हामी पनि हेरिरहेका छौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग हाम्रो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्बन्ध हो । त्यसैले नेकपाभित्र केही सहजीकरण गरिदिँदा समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने चीनलाई लागेको होला । संसारमा विलय हुँदै गरेको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालमा विभाजन नहोस् भनेर लागेको होला । तर, कमिटीका सदस्यहरुको मान्यताविपरीत चीनले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावास कम्मर कसेर लागेको थियो । त्यतिबेला यही केपी ओलीले होटलहरुमा भेटेको नजिरहरु त छँदै छ । आफ्नो अनुकूल हुँदा राम्रो ठान्ने, अरुको बेलामा अर्कै तरिकाले हेर्ने । यसरी त हुँदैन ।
नेकपाको विवाद त पार्टीकै नेताहरुले मिलाउनुहुन्छ । उहाँहरुको शुभेच्छा हुन सक्छ । चिनियाँ राजदूतको सुझाव यदि उपयुक्त भयो भने मान्न सकिन्छ । हामी आफ्नो समस्या त आफ्नो हिसावले समाधान गर्छौं नि ।
कुनै राजदूत भेट्नु त्यो व्यक्तिको इच्छामा निर्भर पर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै एउटा पत्र जारी भएको थियो कुटनीतिक व्यक्तिहरुसँग यसरी भेट्नु राम्रो होइन भने । सरकारमै बसेका व्यक्तिहरुले त्यसको पालना गर्दैन । (नेकपाका केन्द्रीय सदस्य झासँग गरिएको कुराकानीको आधारमा)